Thu, May 26, 2022 | 14:33:12 NST
क्यान्सरको कारणले कामदारको मृत्यु भए के कस्तो सहयोग पाइन्छ ?
प्रश्नः मेरो दाई कतार गएको ६ महिना पछि नै क्यान्सर रोगी भएर नेपाल फर्कनु भयो। फर्केको १० महिना पछि उपचारकै क्रममा वहाँको मृत्यु भयो। दाईको जिवन बिमा सुर्य लाइफ इन्सुरेन्समा जिवन बिमा गरेको कागजात वहाँको मृत्यु भएको १० महिना जति पछि मैले भेटे। अब हामीले बिमा वापतको रकम पाउछौँ कि पाउदैनौँ ? उत्तरः वैदेशिक रोजगार प्रवद्धन बोर्ड कामदमरको करार अवधि भित्र क्यान्सर रोग सुरु भएको र क्यान्सरकै कारणले मृत्यु भएको हो भने वहाँको परिवारले सहयोग पाउन सक्नुहुन्छ। क्यान्सर भएर उपचार गर्दा गर्दै ज्यान गएको हो ...
नेपाल छुट्टिमा आएपछि छुट्टिको अवधि बढाउन सकिन्छ ?
प्रश्नः म कतारबाट दुई महिनाको छुट्टिमा घर आउदै छुँ। मैले कम्पनीसँग चार महिनाको छुट्टि मागेको थिए, तर दिएन। यदि काम पर्‍यो भने मैले नेपालबाट समय थप्न सक्छु ? सकिन्छ भने कति समय थप्न मिल्छ र कति पैसा लाग्छ ? कहाँ जानुपर्छ ? के के चाहिन्छ ? उत्तरः नेपाल आएपछि केही काम पर्दा थप छुट्टि लिन नसकिने भन्ने होइन। बिदा बस्नुपर्ने कारण खुलाएमा कम्पनीले छुट्टि थप्न सक्छ। तर कम्पनीले छुट्टि अनिवार्य रुपमा थप्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हुन्न। तपाईं र विदेशको कम्पनीको समझदारीका आधारमा बिदा दिने नदिने क...
कतारको भिसालाई रद्द गरी मेरो पासपोर्ट फिर्ता पाउछुँ?
प्रश्नः कतारको लागि शुरक्षा गार्डको काममा भिसा आइसकेको छ। अहिले कतार जान समस्या छ कि छैन? मैले कतारको भिसालाई रद्द गरी मेरो पासपोर्ट फिर्ता पाउछुँ? त्यो भिसामा नगएर युएईमा शुरक्षा गार्डमा जान मिल्छ की मिल्दैन? उत्तरः जय जी, कतारमा जानलाई अहिले केहि समस्या छैन। तपाईंले कतार जान नचाहे, भिसा आएपछि पनि नजानसक्नुहुन्छ। तर त्यसको लागि तपाईंले म्यानपावरलाई प्रशासनिक खर्च बापत १० हजार सम्म तिर्नुपर्ने हुन्छ। म्यानपावरले तपाईंको पासपोर्ट फिर्ता गर्छ। भिसा रद्द गरेको ६ महिनासम्म तपाईं कतार जान पाउनुहुने...
भिजिट भिसा कस्तो खालको भिसा हो ? यो भिसामा विदेश जानु कतिको उपयुक्त छ ?
प्रश्नः भिजिट भिसा कस्तो खालको भिसा हो ? यो भिसामा विदेश जानु कतिको उपयुक्त छ ? उत्तरः जय जी, कुनै देशमा घुम्न जानका लागि लिइने भीसा भिजिट भिसा हो। भिजिट भिसा लिएर पर्यटकको हैसियतमा विभिन्न देशमा घुमघाम गर्न सकिन्छ। तर भिजिट भिसा गएर रोजगारी गर्न भने पाइन्न। कसैले भिजिट भिसामा पठाएर विदेशमा राम्रो काम पाइन्छ भन्दैछ भने बुझ्नुहोस् तपाईंलाई उसले ठग्न खोजिरहेको छ।
सरकारले हाल कुन-कुन देशमा श्रमस्वीकृति रोकेको छ ?
प्रश्न १ः म हाल साउदी अरेबियामा छु र म साउदी बाट छुट्टीमा घर जान चाहान्छु। नेपाल सरकारले साउदी अरबको लागि श्रम स्वीकृती बन्द गरेको सुनेको छुँ। साथै साउदी अरब सँग नेपाल सरकारको श्रम सम्झौता नमिलेको कुरो पनि छ। खास चाहि के रहेछ ? उत्तरः करण जी, यो समाचारमा सत्यता छैन। नेपालबाट नयाँ कामदार गइरहेका छन्। नेपाल आएर फेरि तपाईं साउदी फर्कन सक्नुहुन्छ। पुन:श्रमस्वीकृति लिन समस्या छैन्। प्रश्न २ः हाल नेपाल सरकारले अफगानिस्तान र इरानमा श्रमस्वीकृति बन्द गरेको समाचार छ के यो सत्य हो...
वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुको मृत्यू भएमा उनीहरुका छोराछोरीले जागिर पाउँछन् ?
प्रश्नः वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुको मृत्यू भएमा उनीहरुका छोराछोरीले जागिर पाउँछन् ? उत्तरः महेश जी, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएकाको छोराछोरीले जागिर पाउँदैनन। तर कक्षा १२ देखि सम्म पढिरहेकाले छोराछोरीले आठ हजारदेखि १२ हजार रुपैयाँसम्म छात्रवृत्ति पाउँछन्। विदेशमा मृत्यु भएकाको आफन्तले भए प्रक्रिया पूरा गरेर बिमा र वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डबाट समेत क्षतिपूर्ति पाउँछन्।
प्रश्नः म अहिले युएईमा छु। विवाहित हुँ। दुई वर्षको छोरा पनि छ। मेरो श्रीमतीले फोन गर्दा नउठाउने, एसएमएसको रिप्लाई पनि नगर्ने। पटक-पटक कोशिस गर्दा नभएपछि छुट्टि लिएर घर गएँ। समस्या के हो भनेर सोध्दा तपाईंसँग बस्न मन छैन भन्छ। बुवा काकाले गर्दा मसँग विवाह गरेको रे। विवाह भएको १५ दिनबाट यस्तो भएको हो। मैले यो समस्या परिवार र ससुरालीमा राखें। ससुरालीले मिल्नुपर्छ भनेर मिलाएर पठाउनु भो। तर फेरि त्यस्तै भयो। यसले गर्दा मलाई परदेशमा गाह्रो भइरहेको छ। हृदयघात होला जस्तो हुन्छ। यो समस्या समधानका लागि कुन...
प्रश्नः विदेशमा काम गर्न गएर उतै ज्यान गुमाएका मानिसका छोराछोरीले छात्रवृत्ति पाउँछन् भनेको रेडियोमा सुनेको थिएा। त्यसका लागि के गर्नुपर्ला ? उत्तरः बेनामे साथी, विदेशमा मृत्यु भएकाका छोराछोरी वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डबाट छात्रवृत्ति पाउँछन्। त्यसका लागि विदेशमा अभिभावकको मृत्यु भएको हो भन्ने प्रमाणपत्र सहित उनका छोराछोरीले पढ्ने विद्यालयमा निवेदन दिनुपर्छ। विद्यालयले छात्रवृत्तिका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा निवदेन पठाउँछ। त्यो निवेदन शिक्षा कार्यालयले बोर्डमा पठाउँछ। सोहि निवेदनको आध...
श्रम गर्दा के के कागजात चाहिन्छ। के के प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ?
प्रश्नः म यहाँ आएको एक वर्ष चार महिना भयो। भिजिट भिसामा आएको हुँ। आउँदो भदौमा नेपाल आउँदै छु र श्रम गर्ने सोच बनयको छु त्यसैले अब श्रम गर्दा के के कागजात चाहिन्छ। के के प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ? उत्तरः चित्रराज जी, भिजिट भिसामा युएई गए काम गर्दा श्रम स्वीकृति नलिएको हुनाले नेपाल फर्किदा श्रम स्वीकृति अनिवार्य रुपमा लिनुहोला। त्यसका लागि बिदामा नेपाल आउनुअघि नेपाली दूतावासबाट सिफारिस पत्र बनाउनुपर्छ। दूतावासबाट प्रक्रिया पुरा गरे मात्रै श्रम विभाग ताहाचलबाट श्रम श्रम स्वीकृति पाईन्छ...
वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा गरिने मेडिकल फि देश अनुसार किन फरक हुन्छ ?
प्रश्नः वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा गरिने मेडिकल फि देश अनुसार किन फरक हुन्छ ? उत्तरः बेनामे साथी, मलेसिया जाने कामदारले मेडिकल गरेवापत झण्डै आठ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। साउदी अरब, ओमन र बहराइन जाने कामदारले झण्डै सात हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। यी बाहेकका खाडीका देशहरु जाँदा कादारले कम्तीमा ४५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। विदेश जाने कामदारले अनिवार्य रुपमा सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ। त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थाहरु तीन सय भन्दा धेरै छन्। फरक फरक गुटमा आवद्ध भएका म...